Iinguphu zephupha ezivela kuThixo kunye neengelosi kuMbala
Unqulo & Umoya Iingelosi kunye neMimangaliso
Iintsingiselo Ezigqithisileyo Kwiimbali Ezimangalisayo
Imibala ebonakalayo kumaphupha akho anokubaluleka kokomoya kuba umbala ngamnye unentsingiselo ethile ethi uThixo okanye izithunywa zakhe- iingelosi- unokusebenzisa njengempawu kumyalezo ophuphayo.
Iintsingiselo zemibala zingabonakalisa ukudibanisa kwakho kunye nemibala ethile okanye intsingiselo yendalo yonke loo mibala. Nantsi indlela yokutolika intsingiselo yemibala ebonakala kumaphupha akho.
Isaziso esibalulekileyo sombala
Ngamanye amaxesha awuyi kubona nayiphi na imibala kumaphupha akho.
Unokuphupha kuphela kumnyama nomhlophe. Kodwa ngokuqhelekileyo, imibala ibonakala ngamaphupha kwaye xa omnye umbala ubamba ingqalelo yakho, ingaba yinto ethile malunga nomyalezo wephupha.
Ukuba umbala othile uphelele kwelinye lamaphupha akho afana nokukhonza njengesihluzo kuzo zonke iimifanekiso ozibonayo okanye ukugqamisa umntu okanye into edlala indima ephambili kwiphupha lakho, loo mbala unokuba ngumqondiso wesigijimi somphupha kuwe. A
Uvakalelwa njani Xa Uvuka?
Ekubeni imibala imele ibonise iimvakalelo , kubalulekile ukuba uqaphele isimo sakho sengqondo emva kokuvuka kwiphupha. Ngaba uziva uhlungu, unomsindo , okanye uloyiko ? Ngaba wayenokuthula, onwabileyo okanye ovuyayo? Gcina iimvakalelo zakho engqondweni njengoko uzama ukutolika iphupha lakho kuba zivame ukuhambelana nayo nayiphi na imibala oyibona kwiphupha.
Ukwahluke phakathi kwezinto ezibonakalayo okanye eziqhelekileyo
Kwakhona kubalulekile ukuba uqaphele indlela omeleleyo okanye obuthathaka ngayo imibala oyibonayo kwiphupha lakho.
Imibala eqinile, ecacileyo idibene neengcamango ezivakalelwa kunye neemvakalelo, ngelixa imibala engapheliyo, imibala exubileyo inxulumene neengcamango ezingenamntu kunye nemizwa.
Cinga ngoxhumo lomntu
Ukurekhoda njengoko unakho ukukhumbula malunga nephupha ngalinye ngokukhawuleza xa uvuka. Hamba ngeenkcukacha ozirekhode kwaye uzibuze yona imibutho yabanye onayo ngemibala ethile ephuphayo.
Naluphi na udibanisa imibala ekufuneka uphile ngobomi bakho usebenze njengengcaciso kwiintetho zabo kwiphupha lakho.
Ngokomzekelo, isilwanyana sakho esithandwayo sinokuba yintaka ye-orange okanye inja emdaka, ngoko ukuphupha nge-orange okanye emdaka kunokunxulumana nezinye iingcamango okanye iimvakalelo ezikuyo ingqondo yakho. Okanye unokuqhuba imoto eluhlaza okwesibhakabhaka, kwaye uphupha malunga nomthunzi ofanayo ohlaza okwesibhakabhaka ungabonisa umyalezo malunga naluphi ulwalathiso obomi bakho obukuyo ngoku. Iingcamango ezinxulumene nobuntwaneni bakho zingabonakalisa into efana nomdlalo onokuzibaluleka owakhulayo, njengebhayisiki ebomvu. Iphupha malunga nomhlobo othile okanye ilungu lentsapho linokubandakanya umbala omncintisayo womntu okanye umbala wengubo akhetha ukugqoka rhoqo.
Jonga kwiiNguqulelo eziPhezulu zeNdalo
Ngaphandle kwayo nayiphi na inxulumano lomntu onokuthi ube nayo imibala kumaphupha akho, nemibala inemiqondo yokufuzisela yonke into eyenziwe kwimbali yomhlaba kunye nemida yeenkcubeko.
Abanye bakholelwa ukuba uThixo okanye iingelosi ziyakunxibelelana nemiyalezo engokwenyaniso kuwe ngemibala yemibala ukuba bakholelwa ukuba uya kuphulaphula imiyalezo kule fomu. Imibala yindlela enhle, enhle kakhulu yokubonisa imibono ejulile kwindawo yokomoya.
Abanye bakholelwa ukuba iingelosi zisebenza kwizabelo ezihambelana namandla ekukhanyeni kwemimbala eyahlukileyo , kwaye ukukhanya ngokwawo (okubandakanya imibala emininzi) kufanekisela ukukhanya kukaThixo kubantu.
Igolide okanye i-Amber
Ukucoceka, inyaniso, ithemba, ukulunga
Ukulahlekelwa (okufana nokufa okanye enye into eshiya engenanto ebomini bakho), iingcamango zakho kunye nemizwa yakho, imfihlelo, ububi
Ukungahambi kakuhle, i-detachment
Inyaniso, ukholo, uxolo, ukuthetha ngokucacileyo
Ubundlobongela, umdlalo, umsindo, ingozi, ihlazo
Ukuphilisa, ukuchuma, ubunjani, ukulinganisela
Uthando, uvuyo, ububele
Amandla, uvuyo, ubulumko, ubuchule
Ukuzinikela, ukukhula ngokomoya, imfesane
Ukuzinza, ukuqhuba, ukunyanzeliswa, ukukhungatheka
Inxanxheba, ubunzima, ukulahla ukungcola
Iingcaphumo eziphefumlelweyo Ngoomama, iiNgelosi kunye neMimangaliso
Iimpawu ezidumile malunga neengelosi ezinkulu
Queen of Egypt yaseCleopatra